श्रीमानले सेक्स गर्न अघि रक्सि पिउनु हुन्छ र मलाई पनि पिउन कर गर्नु हुन्छ,रक्सि नपिए सम्म सेक्समा रुची राख्नु हुदैन किन होला ? « Npnews
February 18, 2018 Sun
श्रीमानले सेक्स गर्न अघि रक्सि पिउनु हुन्छ र मलाई पनि पिउन कर गर्नु हुन्छ,रक्सि नपिए सम्म सेक्समा रुची राख्नु हुदैन किन होला ?
प्रकाशित मिति: September 29, 2017
म ३३ वर्षकी भएँ । मेरो विवाह भएको ६ वर्ष भयो । मेरा श्रीमान् ३९ वर्षको हुनुहुन्छ । हाम्रो मागी विवाह भएको थियो । उहाँ सुरुदेखि नै यौनसम्बन्ध राख्नुअघि बियर वा रक्सी पिउन रुचाउनुहुन्छ । वियर वा रक्सी नपिई यौनेच्छा नै नहुने उहाँबताउँनुहुन्छ । हिजोआज मलाई पनि ती कुरा पिउन कर गर्नुहुन्छ । बिस्तारै उहाँको यस्तो व्यवहार बढ्दै गएको छ । उहाँको यस्तो व्यवहारले मलाई दिक्क तुल्याउन थालेको छ ।
मलाई यस्तो व्यवहारले भविष्यमा नकारात्मक असर गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ । के मेरो डर साँचो हो ?कतिपय मानिस बियर वा रक्सी पिएपछि आफू नजिकको व्यक्तिलाई आकर्षक देख्छन् । उनीहरू रक्सी पिएको व्यक्तिलाई पनि आकर्षक देख्न थाल्छन् । जो आफू आकर्षक नभएको महसुस गर्छन् उनीहरूले बियर वा रक्सी पिएपछि आकर्षक भएको महसुस गरेपछि त्यसको असरस्वरूप यौनसम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने मान्छन् । एक अनुसन्धानमा बियर वा रक्सी पिउन दिएपछि पुरुषलाई महिलाको तस्बिर तथा महिलालाई पुरुषको तस्बिर हेर्न लगाई उनीहरूको प्रतिक्रिया लिइएको थियो । बियर वा रक्सी पिएको तथा नपिएको अवस्थामा एउटै तस्बिर हेर्दा व्यक्त हुने प्रतिक्रियाका आधारमा नतिजा निकालिएको यो अध्ययनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बियर गुगल भनिन्छ ।
रक्सीे वा बियरको सेवनले यौन व्यवहारमा अनेकन असर गर्न सक्छ । यसको प्रभावले यौन क्रियाकलाप घटाउँछ । आफ्नो लाज लुकाउन खोज्दा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ । क्षणिक रूपमा उत्तेजित गरिसकेपछिको अवस्थामा मादक पदार्थ सेवन गर्नेहरूमा दिक्दारी देखा पर्छ । रक्सी सेवनपछि शारीरिक प्रणालीको सन्तुलनमा प्रतिकूल असर पर्न थाल्छ । रक्सी सेवनले खुसी भइन्छ वा रमाइलो हुन्छ भनिन्छ, तर यसको सेवनले दिक्दारीपन वा रिस बढ्न सक्छ । यसले सन्तुलन वा समन्वयमा पनि नकारात्मक असर गर्छ । मादक पदार्थ सेवनले स्खलनमा समस्या ल्याउने मात्र नभै नपुंसकतासमेत बढाउँदै लान्छ । रक्सीको सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक असर आत्मबल घट्नु हो । परिणाम ? पुरुषको यौन व्यवहारमा नाटकीय असर देखा पर्छ ।
अनुसन्धानहरूअनुसार, थोरै मादक पदार्थ सेवनले पनि अण्डकोषबाट उत्पादन हुने टेस्टोसटेरोन हार्मोनमा कमी ल्याउँछ । टेस्टोसटेरोन हार्मोन यौन उत्तेजनाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसकारण रक्सी सेवनले पुरुषको यौन क्रियाकलापमा असर पार्छ । अनुसन्धानअनुसार त्यसले यौन सन्तुष्टि, यौन उत्तेजना, वीर्य स्खलन तथा चरम आनन्दमा कमी ल्याउँछ । यौनसम्पर्क गर्नुअघिको रक्सी सेवनले विभिन्न जोखिममा परिने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । जस्तै : असुरक्षित यौन सम्बन्ध, अनिच्छित गर्भधारण तथा बलात्कारका साथै यौनरोगको जोखिम पनि उच्च हुन्छ, तर धेरैजसो युवा यसलाई स्वीकार गर्दैनन् । सेक्सपियरको एउटा पुरानो भनाइअनुसार यसले इच्छा त बढाउँछ तर दक्षता घटाउँछ ।
यौनसम्पर्क गर्नुअघि थोरै रक्सी सेवन गर्दा केही मात्रामा लाज हटाएर आफू अगाडि भएको व्यक्तिसँग खुल्न तथा रोमान्टिक महसुस गर्न मद्दत गर्छ । यौनसम्बन्धलाई लिएर नर्भस हुने पुरुषहरूलाई यौन आनन्द लिन र शीघ्र स्खलन कम गर्न मदिरापानले मद्दत गर्ने कुरा बताइन्छ, यद्यपि रक्सी नै यसको समाधान भने होइन ।यदि तपाईंको श्रीमान्ले यौनसम्बन्धभन्दा अघि रक्सी सेवनलाई सहयोगी तत्त्वका रूपमा लिनुभएको छ भने त्यसले लामो समयपछि उहाँको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउन सक्छ । अर्को कुरा, यसले तपाईंहरूको आत्मीय सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पार्छ । यसले बिस्तारै यौन दक्षतामा कमी ल्याउनुका साथै एक–अर्काप्रतिको सम्मानमा पनि कम गर्छ ।
विद्यार्थीलाई निःशुल्क साइकल वितरण, विद्यालय जान सहज
गाईघाट, उदयपुर, ६ फागुन। उदयपुर चौदण्डी नगरपालिका—२ बेल्टारका सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा अध्ययनरत् विद्यार्थीलाई निःशुल्क साइकल वितरण गरिएको छ ।
यो बर्ष २१४ मेगावाट बिजुली थपिने
काठमाडौं – सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि यो बर्ष १४.२८ मेगावाट बिजुली थपिने भएको छ । निजी क्षेत्र
प्रधानमन्त्री ओली अपरान्ह सरकारी निवास बालुवाटार सर्ने
काठमाडौं, ६ फागुन । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओली आज अपराह्न सरकारी निवास बालुवाटार सर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको
नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार गर्न प्रबुद्ध समूहको बैठक काठमाडौंमा बस्ने
काठमाडौं, ६ फागुन । केपी ओली प्रधानमन्त्री बने लगत्तै नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयामको अध्ययन र आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्न
स्कुल नआएको भन्दै विद्यार्थीलाई निर्मम कुटपिट,चिकित्सक भन्छन : ढिला गरेको भए हातै काट्नुपथ्र्यो
गोरखाको मान्बुस्थित भवानी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीलाई शिक्षकले मरणासन्न हुने गरी कुटेका छन् । विद्यालयमा अनुपस्थित भएको निहुँमा ७ कक्षा
लाइसेन्स नभएर चिन्तित हुनेहरुको लागि अत्यन्तै खुसीको खबर ,यस्तो मौका फेरी आउदैन
काठमाडौं । सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सातवटै प्रदेशबाट वितरण गर्ने गरी आवश्यक प्रशासनिक संरचनाको खाका तयार पारेको छ । संघीय मामिला
साेनिका राेकायाले स्टेजमै कपडा उतारेपछी भयाे बबाल (भिडियो सहित)
के तपाईमा यी बानीहरु छन् ? बेलैमा ख्याल गरौ, चाडै मर्छन यस्ता बानी भएका मान्छेहरु, यसरी बचौ यसबाट
नरोउ श्वेता ! भक्कानीएर आँशु थाम्न सकिनन् श्वेताले
महिलाका कुन अङ्गमा स्पर्स गर्दा तुरुन्तै यौन उत्तेजना पैदा हुन्छ – जर्नल अफ सेक्सुअल मेडिसिन
महिलालाई किन बढी हुन्छ हिस्टेरिया, कस्तो स्वभावकालाई धेरै ? यस्तो छ उपचार विधि
रानी मुखर्जीले खोलिन् यस्तो राज, भनिन्, मेरो पतिलाई मतलब छ त मात्र........
विज्ञानका अनुसार महिलाको बच्चा जन्माउने सहि उमेर यो हो
अपहरण परी बेपत्ता भनिएको बेहुला आनन्द सँग भारतमा घुम्दै गरेको अवस्थामा, सबै सुतेपछी राता-रात भारत तिर टाप …
हाल सम्मकै ठुलो भूकम्प गयो !
‘कृ’को व्यापार बारे सुस्मिताको बंग्य ! भन्छिन्, ‘के नाटक गरिरहेको होला ?’
कुन सपना देख्दा कस्तो फल मिल्छ ? कस्तो सपना अरुलाई सुनाउनु हुदैन ? जानी राखौ…
२ गिलास पानीले घटाउँछ ४ दिनमै मोटोपन (यस्तो छ तरिका)
कलंकीमा अनौठो घटना, बिल तिर्न नसकेपछि युवतीलाई ग्राहकसँग रात बिताउन लगाइयो
श्रीकृष्णको नाम बेचेको आरोप लाग्यो स्वेतालाई
खुट्टा बाउँडिने वा छेपारीको मासु फर्कने कारण थाहा छ ? यसको कारण र समाधान बारे जान्नुहोस र अरुलाई पनि शेयर गर्नुहोस